DHAGEYSO Saraakiisha howl galada ka socda gobolada Jubooyinka oo isbadalo lagus ameeyay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Saraakiisha howl galada ka socda gobolada Jubooyinka oo isbadalo lagus ameeyay.
Star FM October 5, 2018
Maamulka Jubaland ayaa sheegay inay taliye cusub oo KMG ah u magacaabeen ciidamada Milatariga iyo kuwa Jubaland ee howlgalada AL-shabaab ka dhanka ah kawada deegaanada hoostaga gobolada Jubooyinka.
Taliyaan cusub ee KMG ah ayaa wuxuu horkici doonaan ciidamada ku wajahan degmada Jamaame halkaas oo qorshuhu yahay in laga saaro xoogaga dowlada diidan.
Gen Yusuf Xassan Cismaan Dhuumaal oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ku sugan gobolada Jubooyinka ayaa sheegay in isbadalo lagu sameeyay Taliyeyaasha hogaaminayay ciidamada howlgalada kawada gobolkaasi.
Wuxuu sidoo kale tilmaamay in ciidamada dowlada Soomaaliya ee halkaasi ku sugan ay wadaan qorshe lagula wareegayo degmada Jamaame oo in mudo ah ay maamulayeen xoogaga -shabaab maadaama hada ay ciidamada xoogga Soomaaliya kaabiga ku hayaan.
Taliyaha cusub ee sii hogaamin doona howlgalka ka dhan ka ah AL-shabaab oo lagu magacaabo gaashaanle dhexe Nuur Xassan Cabdi ayaa sheegay in ciidamada xoogga iyo Daraawiishtu ay hada ku sugan yihiin meelaha ugu dhumaaleysanayaan magaalada Jamaame ayna wadaan qorshe magaaladaasi lagula wareegayo.
← DHAGEYSO Raila Odinga oo sheegay inay khasab tahay in la qabto afti dastuurka lagu bedelo
Madaxweynaha dalka oo sheegay in horumar laga gaaray sayniska iyo teknoolojiyadda →